Iza no manandratra ny fampihorohoroana: Mpianatra ao Hong Kong sa ny governemanta shinoa? · Global Voices teny Malagasy
Meme iray miampanga an'i Shina ho mihatsaravelatsihy amin'ny resaka fampihorohoroana
Voadika ny 11 Septambra 2021 4:23 GMT
Nivoaka tao amin'ny pejy Facebook “toheriko ny herisetran'ny polisy” ny endrika nasiam-panamboarana tamin'ity sary-sy-soratra ity
Sary-sy-soratra iray mampifangarika ny sarin'ny Minisitry ny raharaham-bahiny shinoa Wang Yi mijoro mifanila amin'ny solontenan'ny Taliban sy ny sarin'ny mpianatra avy ao amin'ny Oniversiten'i Hong Kong (HKU) nalaza haingana tao amin'ny media sosialy tamin'ny 18 aogositra 2021. Misy ireo mpiserasera sasany mitady izay itsikerana ny tombo sy hala miharihary amin'ny famaritan'ny governemantan'i Hong Kong sy shinoa ny atao hoe vondrona mpampihorohoro, amin'ny fanoritan-dry zareo ireo vondrona sy mpianatra oniversite maro ho mpampihorohoro mampididoza nefa manamarika ny Taliban ho ‘mpianatra tony fihetsika’.
Nalaza ny sary-sy-soratra efatra andro monja taorian'ny fisamborana mpianatry ny HKU miisa efatra rehefa nandany volavolan-kevitra iray tao amin'ny sendikan'ny mpianatra oniversite ry zareo tamin'ny 7 jolay misaona lehilahy iray nanatsatoka antsy ny tenany ho faty rehefa avy nanafika polisy iray tamin'ny antsy tamin'ny 1 jolay 2021 — tamin'ny tsingerintaona faha-24 namerenana an'i Hong Kong ho an'i Shina. Tamin'ny alalan'ny volavolan-kevitra (motion) ny fikambanan'ny mpianatra naneho ‘alahelo lalina’ tamin'ny falaaftesan'i Leung Kin fai 50 taona ary naneho ny fankasitrahany tamin'ny ‘fisoronany’ [ny tenany] ho an'i Hong Kong.
Fotoana fohy taorian'ny fanafihana, notondroin’ny polisy ho ‘fampihorohoroana ataon'amboahaolo manirery’ ilay fanatsatohana antsy polisy tamin'ny 1 jolay ary nolazainy fa hanome voninahitra ilay fihetsika ny fisaonana ny fahafatesan'ilay mpanafika ary azo heverina ho ‘fandrisihana hetsika fampihorohoroana’.
Niala tamin'ny fanambaràna nataony ireo mpianatra voarohirohy tamin'ny volavolan-kevitra, nanao fialantsiny ampahibemaso ary niala tamin'ny andraikitra misy azy ireo tao amin'ny fikambanan'ny mpianatra tamin'ny 8 jolay rehefa nilaza i Arthur Li, filohan'ny filankevitra mitantana ny oniversite fa tiany ho ampidirina ao amin'ny campus ny [lalànan'ny] filaminam-pirenena.
Tsy nanakana ny polisy hanohy ny raharaha anefa ny fialantsiny ampahibemaso. Tamin'ny 16 jolay, nokarohin'ny polisin'ny filaminam-pirenena ny biraon'ny Sendikàn'ny Mpianatra. Iray volana taty aoriana, tamin'ny 18 aogositra, nosamborina ny mpianatra efatra.
Mpikambana ao amin'ny komity mpanatanteraka ny Sendikan'ny HKU sady mpikambana ao amin'ny vaomieran'ny sendikà ireo mpianatra efatra nosinambotra: Kinson Cheung King-sang, 19 taona, Anthony Yung Chung-hei, 19 taona, Charles Kwok Wing-ho, 20 taona, ary Chris Shing-hang Todorovski, 18 taona. Nentina teo amin'ny fitsarana ry zareo tamin'ny tamin'ny 19 aogositraa amin'ny vesatra ‘fisoloam-bava ny fampihorohoroana’ ary miatrika vesatra hafa ho mandrisika ny hafa handratra manampahefana (polisy). Mijanona ao amin'ny toeram-pihazonan'ny polisy izy rehetra noho ny fandavana ny famotsorana vonjimaika ho an'ny telo ary ny iray kosa miandry ny mbola ijerena ny fahafahana azy vonjimaika. Nahemotra ho amin'ny 14 septambra ny raharaha.
Nalaza haingana ny sary-sy-soratra iray mitsikera
Ao amin'ilay sary-sy-soratra, nampifanatrehana tamin'ny sarin'i Wang Yi tamin'ny 28 jolay ny nandritra ny fihaonana tamin'ny mpitarika vondrona Taliban Afghan tao Tianjin ny sarin'ny vondrona mpianatra nanao fialantsiny tamin'ny hetsika nataon-dry zareo.
Eto ambany ny endrika iray amin'izany sary-sy-soratra izay nalaza haingana tao amin'ny Twitter izany:
#ahnewsfeed miaro ny fampihorohoroana ny fisaonan'ny mpianatra HKU ny fahafatesan'ilay nanafika polisy, ary ahoana ny amin'i fandrisihan'i Wang Yi hiara-hiasa amin'ny Taliban, vondrona mpampihorohoro manana ny lazany tokoa?
Endrika hafa amin'ny sary-sy-soratra, naranty tao amin'ny pejy Facebook ‘Toheriko ny herisetran'ny polisy’, nanolotra ny fehin'ny setriny avy amin'ny Antoko Komonista Shinoa tamin'ny nandrombahan'ny Taliban an'i Kabul ary nanome izao fanontaniana manaraka izao tamin'i Mpiandraikitra Ambony Steve Li Kwai-wah avy ao amin'ny Departemantan'ny Filaminam-Pirenena ao amin'ny Vondro-kerin'ny Polisy:
Noderain'ny AKS=CCP fatratra ny Taliban ary nomeny voninahitra ho fikambanana tony fihetsika, iza moa no heverinao ho miaro ny fampihorohoroana?
Tamin'ny 15 aogositra, Li Shaoxian, Talen'ny Ivotoerana Fikarohana Shina-Arabo ao amin'ny Oniversiten'i Ningxia niteny tamin'ny antsafa nifanaovana tamin'ny Fahitalavitra Foiben'i Shina:
Hita ho niseho tamin'ny fomba vaovao nanoloana ny vahoaka ny Taliban. Taorian'ny nanaovany fahirano ny tanàna iray, namoaka torohay hampahery ny vahoaka izy… notarihana ho any amin'ny asa mahazatra azy ny olona, tsy niditra an-tsehatra ry zareo.
Tamin'ny 16 aogositra, Hua Chunying, mpitondratenin'ny Minisiteran'ny Raharaham-Bahiny namariparitra ny toe-draharaha tamin'izany fotoana tao Afghanistan ho ‘ny faniriana sy ny safidin'ny vahoaka Afghan’ ary naniry ny fahatongavan'ny fanasan'ny Taliban amin'ny fandraisan'i Shina anjara amin'ny tetikasam-panorenana indray ny firenena rahatrizay. Tamin'io andro io ihany, ny seha-baovaom-panjakana shinoa Isanandrom-bahoaka (People’s Daily) nametraka ny vondrona mitam-piadiana islamika tamin'ny mpiserasera shinoa ao amin'ny Weibo ho ‘mpianatra’. Nolazainy fa ny Taliban dia vondrona mpianatra niorina tany amin'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana ary niitatra fatratra satria nahazo fanohanana avy amin'ny mahantra.
Nofafana ny fampidirana tsotsotra, araka ny nolazaina fa taorian'ny fanehoan-kevitra maro dia maro nanontany ny amin'ny tsy nametrahana mihitsy ny maha-vondrona mpampihorohoro ny Taliban.
Nivoaka tany amin'ny fampahalalam-baovao hafa tohanan'ny fanjakana Global Times tao amin'ny fantsony WeChat ny fanehoan-kevitra mitovitovy amin'izany hanaporofoana fa efa mihatony fihetsika kokoa ny Taliban.
Voazara in-330 ny sary-sy-soratra nivoaka tao amin'ny pejy Facebook, ‘manohitra ny herisetran'ny polisy aho’. Misy ireo nametraka fanehoan-kevitra mitsikanikany tahaka ny:
Hanakarama ny Taliban ho mpanolo-tsaina ve ny AKS Hong Kong?
Amin'izao fotoana ny teny no mampidi-doza kokoa noho ny bala. Ireo afa-mamaky teny sy manoratra no mpampihorohoro.
Niteny ny dadatoa [manondro an'i Hua Chunying], ‘hajao ny faniriana sy ny safidin'ny vahoakan'i Afghanistan’, nahoana ry zareo no tsy manaja ny faniriana sy ny safidin'ny vahoakan'i Hong Kong?
Rahatrizay, tokony hianatra avy amin'ny Taliban izany ny mpianatr'i Hong Kong
Niely tany amin'ny mpikatrok'i Hong Kong ampitan-dranomasina ihany koa ny meme, anisan'izany ilay mpikatroka an-tsesitany Nathan Law, izay niditra tao amin'ny Twitter hampiseho ny fihatsarahambelatsihy sy ny tombo sy halan'i Shina amin'ny fampihorohoroana:
1) Sakaiza ny Taliban fa mpampihorohoro ny mpianatry ny oniversite
2) 24 ora no nisamborana sy nandefasana ireo mpianatra ireo ho any amin'ny fitsarana, saingy mbola tsy notsaraina hatramin'izao ireo politisiana sy mpikatroka miisa 47, nosamborina tamin'ny feb 2021.
Sahin'ny AKS ny mitaky fa vondrona mpianatra fotsiny ny Taliban izay nandray fiadiana mbola hahatonga ny fiainan'ny Afghan ho tsaratsara kokoa. Saingy nanome baiko ny governemantan'i Hong Kong ny AKS tsy hanana fangorahana amin'ny mpianany. Tsy nanao diso ireo mpianatra ireo fa nisaona lasibatry ny governemanta biby. Mampihomehy.
HK police arrested HKU students for “justifying terrorism” as they mourned a person's death while China allies with the Taliban
Nosamborin'ny polisin'i HK ny mpianatry ny HKU fa “manamarina fampihorohoroana” noho ny fisaonan-dry zareo fahafatesan'olona iray raha miara-dia amin'ny Taliban kosa i Shina. Fotoana mampihomehy e?